Ixabiso lokwakha kuwo onke amaNyathelo oKhenketho lwakho loMthengi | Martech Zone
Ukuvala ukuthengisa ngumzuzu omkhulu. Kuxa unokubhiyozela wonke umsebenzi osele ufumene umthengi omtsha. Kulapho iinzame zabo bonke abantu bakho kunye neCRM yakho kunye nezixhobo zeMarTech zisiwe. Yipop-champagne kwaye uphefumla umzuzu wokuphumla.
Kukwasisiqalo nje. Ukuqhubela phambili nokucinga amaqela athatha indlela eqhubekayo yokulawula uhambo lwabathengi. Kodwa ukuhanjiswa phakathi kwezixhobo zemveli kungashiya umsantsa kuthethathethwano phakathi kokusayina kumgca ochaziweyo kunye nohlaziyo lothethathethwano. Kulapho ulawulo lwamaxabiso abathengi lungenza wonke umahluko.
Into ekudala ibonwa njengesixhobo esinamandla sokuthengisa ngoku ikwayinto ebalulekileyo yokuqinisekisa impumelelo yabathengi. Ngexesha lenkqubo yokuthengisa, kugxilwe kwixabiso ekunokwenzeka ukuba liseke imeko ecacileyo yeshishini kwimveliso yakho kunye namanyathelo okusisiseko kwimimandla yefuthe ebaluleke kakhulu kumthengi wakho omtsha. Ngaphandle kokuzibophelela kwixabiso lombutho ngokubanzi, kulula ukuba uphoswe kukusebenzisa esi siseko njengoko ubudlelwane buqina. Ke ngoko, ukuba nezixhobo zexabiso ezinokusetyenziswa ziintengiso zakho kunye namaqela okuphumelela kwabathengi kubaluleke kakhulu.
Lonke ulwazi kunye nokuqonda okuqokelelwe ngexesha lenkqubo yokuthengisa kungangqinisisa ukuxabiseka ngokulinganayo kulawulo lokwamkelwa kunye nokusetyenziswa okukhulayo kweemveliso zakho. Emva kwayo yonke loo nto, impumelelo yabathengi isekwe kumbono wokuhambisa ixabiso elifanelekileyo kubathengi bakho.
Umcimbi wamaqela amaninzi okuphumelela kwabathengi yindlela yokwenza elo xabiso lingenakulinganiswa kwaye ulibonise ngeendlela ezinempembelelo. Kulapho ukuba nedashboard yexesha lokwenyani yexabiso elizisiweyo kunokwenza wonke umahluko ekugcinweni nasekuxoxweni kwakhona. Endaweni yokudlala ngokuzikhusela, ukubhenela kwisaphulelo, okanye ukunyamezela amaxabiso aphezulu e-churn, ukuthembela kulawulo lwexabiso labathengi kunika amaqela okuphumelela kwabathengi amandla okudlula kwimiqobo yokuthenga ngokwesintu, evula indlela yokuthengisa / ukuthengisa ngokusebenzisa i-ROI yokwenyani yexabiso kunye nexabiso iimetrikhi.
Umzekelo, Inkonzo, inkokeli ekusebenziseni ukuhamba kwedijithali, yenza ukuba izixhobo zokulawulwa kwexabiso labathengi zifumaneke kumaqela ayo ngokubanzi. Oku kwenza ukuba nabani na onoxanduva lwemisebenzi ejonge kubathengi abale kwaye abelane nzulu ngexabiso leemetrikhi. Ngenxa yoko, wonke umntu wakwazi ukumilisela iincoko zabo, imiboniso kunye nezixhobo kwixabiso elinokulinganiswa elenziwa yiNkonzoNow kubaxumi bayo. Ngenxa yale mizamo, inkampani iphucule ireyithi yayo yokuphumelela kwimisebenzi ekhokelwa yintsimi nge-1.7X kwaye iphindwe kabini inqanaba lokuncamathisela kumathuba okuthengisa.
Le yindlela ecacileyo yokudala abathengi ebomini, elona nyathelo lokugqibela lokuphumelela kwindlela amaqela akho alulawule ngayo uhambo lwabathengi. Ukwenza ixabiso lilitye lembombo kunxibelelwano lwakho nolwakhiwo lobuhlobo yinto ebalulekileyo yoku. Incoko yexabiso elinokubakho inamandla okuvula amanqanaba amatsha okuzibandakanya. Yile ndlela iinkampani ezenza ngayo utshintsho ukusuka kumthengisi ukuya kumcebisi othembekileyo. Ngokwenza njalo, ukuthengisa okunqamlezileyo kunye nokuthengisa phezulu kube ziincoko eziphilayo ezivela kumbono ophakamileyo. Ngale ndlela, ubudlelwane baba intsebenziswano yexesha elide kunye nexabiso labathengi lexesha elide (LTVkunye nengeniso ephindaphindayo ()I-NRR) ziphuculwe ngokumangalisayo.
Ngokujolisa kwixabiso, iinkampani zinolwazi olunokulwenza ukuze zenze olona lwalamano lukhoyo kwaye zikhule ngokusekwe kukuqonda okwabiweyo kwempumelelo efanayo kunye nabathengi bazo. Ukunxibelelana rhoqo kwexabiso elihanjisiweyo, endaweni yokuba kuhlaziyeke phezu kwetafile okanye abathengi bekhalaza, kwenza ukuba iinkampani zibeke isiseko ngokuthe kratya kulwalamano lokuphumelela. Ukuba iqela lakho lempumelelo lomthengi linokuphakamisa iincoko zalo ziye kwinqanaba elilawulayo, iincoko zokuhlaziya zinokugxila kwinto onokuyenza ngokulandelayo xa kuthelekiswa nokuphikisana noko kufezekisiweyo ngaphambili. Konke malunga nokuthetha ulwimi lweshishini kunye nexabiso lemali. Oku kukwenza ukuba oku kunxibelelana kugxile ekucwangciseleni ixesha elizayo endaweni yokubonisana kunye nokuthethelela ubudlelwane.
Ixabiso liNcoko eqhubekayo
Njengotshintsho lweemfuno, amashishini aguquka, andisa, kunye ne-pivot, yintoni abathengi bakho abayixabisayo iinguqu ekuhambeni kwexesha. Ukundwendwela ngokuthe rhoqo ixabiso leemetrikhi zombini iqela lakho kunye nabathengi bakho bajolise kuyo kubalulekile. Inxalenye yokuzibandakanya kwimpumelelo yabathengi kufuneka kuvavanye kwaye kusekwe imilinganiselo emitsha yempumelelo yokuqinisekisa ukuba wena kunye nabathengi bakho niceba ikamva kunye. Esi sisiseko sohambo lomthengi ekwabelwana ngalo.
Ngokubeka ixabiso embindini wohambo lwabathengi bakho, amaqela akho anendlela enyanzelekileyo yokwakha kwimpumelelo kunye nokwenza isangqa esilungileyo sexabiso labathengi. Kwaye iziphumo zokubandakanya ixabiso kuhambo olupheleleyo lwabathengi zicacile: Ukwanda kokwoneliseka kwabathengi. Ukunciphisa abathengi. Amanqaku okuphucula aphezulu (NPS). Ingeniso eNkulu yeNqanaba leNet (I-NRR). Zonke zongeza kwisibonelelo esisezantsi esinamandla, esinokulinganiswa nesinentsingiselo.
tags: CRMuhambo lwabathengiiihambo zabathengiulawulo oludibene nabathengiukulungiswa komsebenzi wokuhamba kwedijithaliisixhobo sokuthengisaukuthengisa ukuhambahamba ngokuzenzekelayoyenkonzoukujikeleza komsebenziukwenziwa komsebenzi